“Waxaan awoodnaa inaan ka sara marno kooxaha Man City iyo Liverpool” – Harry Kane – Gool FM
“Waxaan awoodnaa inaan ka sara marno kooxaha Man City iyo Liverpool” – Harry Kane
(London) 27 Agoosto 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur Harry Kane ayaa aaminsan in kooxdiisu ay garaaci karto Manchester City iyo Liverpool si ay ugu guuleystaan ​​hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay kabtanka kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa inaan helnaa dhibcaha kulamada waaweyn, iyo inaan badino kulamo badan ee xiriir ah si aan kaga sara marno kooxaha Manchester City iyo Liverpool, waxaan rajeynayaa inaan sidaas sameyn doono”.
“Waxa dhacay waa inay nagu qasbaan in kulamada waaweyn ee adag aan ka helno dhibcaha, isla markaana aan soo bandhigno wax qabad ka fiican kulankii Newcastle United”.
Si kastaba ha noqotee, Tottenham ayaa haatan isku diyaarineysa inay wajahdo Arsenal kulanka London derby ay Axada soo aadan kuwada ciyaari doonaan horyaalka Premier League, kaasoo ka dhici doono Emirates Stadium.
“Waa idin baryaa ha u ogolaanina Neymar inuu ku biiro koox kale” – Barcelona oo fariin codsi oo cajiib ah loo diray